Sababa la xiriira koobka aduunka 2018…. Sandro Wagner oo qaadacay Germany iyo Joachim Löw oo ka jawaab celiyay – Gool FM
(Gemany) 18 Maajo 2018. Waxaa sii xoogeesanaya dagaalka kubada cagta dalka Germany, kadib go’aankii uu Joachim Löw kaga saaray weeraryahanka kooxda Bayern Munich Sandro Wagner liiska ciyaartoyda Germany ee koobka aduunka 2018
Liiska xidigaha xuka qaranka Germany ee koobka aduunka bilaabmi doona 14-ka bisha june ee soo aadan ayaa laga waayay xidigo dhowr ee muhiim ah uu uhu muhiimsan yahay Sandro Wagner.
kaasoo go’aansaday inuusan mar kale u ciyaari doonin xulkiisa Germany sababa la xiriira go’aankan.
Xidiga kooxda Bayern Munich ayaa wuxuu yiri: “Aniga ahaan way iska cadahay in qaabka tooska ah ee aan xaaladaha ula dhaqmo, waa midaan munaasab ku ahayn kooxda Joachim Löw” isagoo intaas kusii daray inuusan dib dambe ugu ciyaari doonin xulka qaranka Germany.
Dhinaca kale Joachim Löw oo aan arintan ka aamusin ayaa wuxuu jawaab kaga bixiyay: “Waxaan qeyb ka noqon karaa niyadjabka Sandro Wagner, laakiin waxaan u maleynayaa fal celintiisa in ay tahay mid ka badbadis ah ee aan la caqbali Karin iyo sidoo kale go’aankiisa kaga aadan inuusan dib dambe ugu ciyaari doonin xulka Germany.
Tani waxay noqon kartay fursadii ugu danbeysay ee 30 jirkan uu kala qeyb gali lahaa Koobka Aduunka, gaar ahaan xili uu u ciyaaray kaliya 8 kulan caalami ah xirfadiisa kubada cagta.
Shax laga sameeyey xiddigaha xulka qaranka Faransiiska ee laga reebay Koobka Adduunka 2018